Mohamed bin Zayed oo loo doortay Madaxweynaha Imaaraadka Carabta – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Mohamed bin Zayed oo loo doortay Madaxweynaha Imaaraadka Carabta
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ayaa si rasmi ah loogu doortay Madaxweynaha Dowladda Isu-tagga Imaaraadka Carabta, kaddib kulan ay maanta yeesheen Golaha Sare ee Federaalka.
Mohamed bin Zayed oo bedelaya Sheekh Khalifa oo geeryooday jimcihii, ayaa ah 61 sano jir, Waxaana magaciisu ku jiraa shaqsiyaadka saameynta balaaran ku leh siyaasadda bariga dhexe.
Sheekh Maxamed ku magac-dheer MBZ waxa uu bilaabay in uu awood yeesho wakhti uu walaalkii Sheekh Khaliifa la soo deristay xanuunka Istaroogga sannadkii 2014-kii. Waxaa uu ka qalin jabiyay Akademiyada Millateriga ee Boqortooyada Ingiriiska ee Sandhurst, wuxuu amar ku bixiyaa mid ka mid ah ciidamada ugu qalabaysan ee gobolka Khaliijka.
Ragga lagu tilmaamo inay dunida ugu qanisanyihiin ee gaaladana u badan, qaniimadooda waxay kukasbadeen dadaal xooggan oo salka kuhaya waxsoosaar qeyralcaadi ah iyo handasaad caalamka manaafacaad badan kusoo kordhiyay. Waa rag asiibay sida ay Islaamnimadu fartay oo la oran karo hantidoodu waa uxalaal.
Carabtase, hantida qarraqaadda ah ee ay ku kibreen far qura uma aysan fidinin, iska daa inay kasbadeen e. Waa duulka aadmiga ugu caajissan, laakiinse fadliga ballantii Rabbi (SWT) uu Nebi Ibraahim (CS) ugu qaaday durriyadda wiilkiisa Nebi Ismaaciil (CS) ayay kuhaleeleen qaniimadan dhulka kasoo burqanaysa ee sidan ugataajireen.
Reer Al-Nahyaan oo keliya ayaa lagu xantaa inay kufadhiyaan hanti gaaraysa ama ka badan 150 Bilyan oo doollar. Kan hadda dhaxaltooyada lehna waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 30 Bilyan oo doollar. Hantida xalaasha ah ee uu Rabbi dhulka ka irsaaqay waxay kufaddareeyeen ganacsiyada ay faraha la galeen ee ribada iyo khamaarka salka kuhaya, iyo kaabayaasha waddamada sab’oolsan ee ay dulmiga, boobka, iyo dhaca kaga taajirayaan.
Markaasaa – kaaga daran e – waxay isku magacaabeen “Shuyuukh”. Marka macnaha diiniga ah lagusaleeyo, ma magaca iyo mansabka “sheekh” iyo waxaa is gaya dhaqanxumada Islaamnimada ka baxsan ee ay kudhaqmayaan?
Ninkani haddii uu joogi lahaa xilligii Rasuulka (SCW) wuxuu ku jiri lahaa safkii Munaafaqii weeynaa ee ahaa, C/llaahi Ibnu Salool!!!
Maalin dhaweyd Waxaan arkayey isagoo dalkiisa ku qabtay, xaflad loogu dabbaal degay maalintii aay Yahuuda qabsatay dhulka Falastiin!!!